Isikhundla seJobe eDaily for Indian - Faka isicelo neThimba lethu!
Isikhundla seJobe eDaily for Indian
Yini okusha در دبی-ما در حال جذب نیرو در خاورمیانه هستیم!
Kushicilelwe ngu Dubai City Inkampani at November 13, 2018
Isikhala somsebenzi ku Dubai ngoba Indian nge Dubai City Inkampani. Amathiphu ethu okuqasha asiza abafuna umsebenzi waseNdiya. Inhloso yethu ukubasiza bafinyelele emakethe yokuqashwa. Dubai City Company ngokubeka ngempumelelo izinkulungwane zabantu abafuna umsebenzi. Futhi siyakwazi ukubasiza. Ikakhulu ukuthi ungathuthela kanjani e-United Arab Emirates. Izithuba zomsebenzi e Dubai noma e-Abu Dhabi. Kuvuleleke kakhulu abaphathi baseNdiya kanye nabafundi abasanda kuqeda izifundo. Ngakho-ke, kungakhathaliseki ukuthi uyini isipiliyoni sakho. Ungakwazi isicelo sokusebenza Emirates.
Futhi nakanjani, ungakwenza kanye nathi ithimba lochwepheshe. Futhi wethu HR abaphathi uzokuqondisa ukusebenza emsebenzini phesheya. Ngakho-ke ukukhathazeka kwakho kuphela kuyoba, kungani angizitholanga le website ngaphambili ?. Ngakho, Ngokuvamile, zama thola okuningi ngangokunokwenzeka emsebenzini wethu. Futhi unalokhu engqondweni, bheka ukubheka kwethu blog. Ngemuva kwalokho faka isicelo ohlwini lwabacebisi abasha nabavuseleliwe bezisebenzi. Futhi sinethemba uzothola izihloko ezithakazelisayo nezishukumisayo.
Ngakho, uma ubheka ukuze uthole umsebenzi e-Dubai njengomuntu waseNdiya, kufanele ubhalise iphrofayili yakho nenkampani yethu. Bese uthole abantu abaningi oxhumana nabo futhi uxoxe nabo mayelana I-United Arab Emirates. Sengisho nje, indlela engcono kakhulu njengomuntu waseNdiya ukuxhuma namanye amaNdiya. Futhi lokhu kuzokusiza ukuba ufinyelele impumelelo enkulu ku indlela yokuphila yakho yokuphila.
Chofoza esithombeni ukuqala ne-Dubai Company
Inkampani yaseDubai City manje ukuhlinzeka ngemikhombandlela emihle nezingcezu zolwazi zomsebenzi weDubai. Ithimba lethu linqume ukwengeza ulwazi ngolunye ulimi lwethu I-Dubay expats. Ngakho-ke, unalokhu engqondweni, manje ungathola izinkomba, amathiphu kanye ukuqashwa e-United Arab Emirates ngolimi lwakho.